आइफोन ८ को बुकिङ सुरु - Living with ICT
Home / Featured / आइफोन ८ को बुकिङ सुरु
Admin Oct 22, 2017	1 Comment
एप्पलले गत सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको आइफोन ८ र ८ प्लसको नेपालमा प्रि बुकिङ खुल्ला गरिएको छ । नेपालका लागि एप्पलको आधिकारिक वितरक जेनेरसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्स प्रालिले विभिन्न स्टोरहरु मार्फत प्रि बुकिङ खुलाइएको जनाएको छ ।
एप्पलको आधिकारिक विक्रेता मध्ये ओलिज स्टोर, इभो स्टोरमा आइफोन ८ र ८ प्लसको अनलाइन बुकिङ लिन थालिएको छ । दुई फोन तिहारको आसपासमा आइसक्ने भन्दै प्रिबुकिङ सुरु गरिएको हो । आइफोन ७ र ७ प्लसका विस्तारित संस्करण आइफोन ८ र ८ प्लस एक महिना अघि अमेरिकामा सार्बजनिक गरिएको थियो ।
यी नयाँ फोनको स्वरुपमा भने खास परिवर्तन गरिएको छैन। यी हेर्नमा ७ र ७ प्लस जस्तै देखिन्छन्। आइफोन ८ मा ४.७ इन्च र ८ प्लसमा ५.५ इन्चको रेटिना एचडी डिस्प्ले छ । दुवैमा पछाडि १२ मेगापिक्सेलको क्यामरा छ। आइफोन ८ प्लसमा भने दुई वटा लेन्स छन्। त्यस्तै सेल्फीका लागि दुबै सेटमा ७ मेगापिक्सेलका क्यामेरा राखिएको छ। यी दुबै फोनले फोरके भिडियो खिच्न सक्छन् ।
ओलिज स्टोरका अनुसार आइफोन ८ को ६४ जीबी इन्टरनल स्टोरेज भेरियन्टको ९८ हजार ५ सय तथा २५६ जीबी इन्टरनल स्टोरेज भेरियन्टको १ लाख १९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै आइफोन ८ प्लसको ६४ जीबी इन्टरनल स्टोरेज भेरियन्टको १ लाख १२ हजार ५ सय र २५६ जीबी इन्टरनल स्टोरेज भेरियन्टको १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मूूल्य तोकिएको छ ।
Previous टेलिकमले ल्यायो तिहार र छठका लागि आकर्षक अफर
Next शाओमीको ए वान र नोट ५ ए बजारमा
I phone 7plus is far better than those 8 series iPhones ! Only cost climbs up but the specs are less better than7series iPhones !
So think at least ten times before you buy it!